सरकारले गरीबका लागि प्याकेज घोषणा गर्नु पर्दैन ? – Lokpati.com
राशिफल पक्राउ सरकार मृत्यु प्रधानमन्त्री नेकपा अपराध केपी शर्मा ओली प्रचण्ड नेपाल प्रहरी अमेरिका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेपाली काँग्रेस पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड चितवन
सरकारले गरीबका लागि प्याकेज घोषणा गर्नु पर्दैन ?
कोराना अर्थात् कोभिड १९ जुन शब्द अहिले विश्वभरि नै प्रख्यात बनिसकेको छ र आफ्नो प्रभावले पुरै विश्वलाई नै त्रसित बनाएको छ। यो भाइरस चीनको वुहानबाट सुरु भई अहिले विश्वका करिब १९५ देशमा फैलिएको छ। जसबाट आजसम्मको रिपोर्टअनुसार विश्वभरिमा ४ लाख ३९ हजार ६ सय ५४ मानिसहरुमा संक्रमित भइसकेका छन्। १९७४४ जना व्यक्ति यस महामारीबाट मरिसकेका छन्, विश्वभरिबाट यसको प्रकोपबाट १११९४१ जना व्यक्तिहरु निको भई घर फर्किएका छन्।
विश्वको स्वास्थ्य तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो नाम कमाएका देशहरुले पनि यसको चपेटबाट बच्न सकेका छैनन्। हामीलाई थाहै छ होला विश्वको स्वास्थ्य सेवामा एउटा छुट्टै नाम कमाएको राष्ट्र इटाली, जहाँको स्वास्थ्य प्रणाली नेपालको भन्दा दशौं गुणा राम्रो मानिन्छ, त्यो देश कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी आक्रान्त छ। सुरुको दिनमा यो माहामरीलाई सानो तिनो मानेर त्यति ध्यान नदिएका कारण आज इटाली अस्मसानघाट नै बन्न पुगेको छ।
यति मात्र होइन, विश्वसामु आफूलाई सबैभन्दा शक्तिशाली मान्ने राष्ट्र अमेरिका यसको प्रभावबाट बच्न चुनौतिसँग लडिरहेको छ। विश्वकै विकसित शहर मानिने न्युयोर्कमा पनि आजदेखि लकडाउनको घोषणा भएको छ। आजको रिपोर्टअनुसार अमेरिकामा ८५४ जना मानिसहरुको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालमा पनि कोरोना भाइसबाट ३ जना नेपाली संक्रमित भएका छन् भने बेलायत र अमेरिकामा गरी २ नेपालीको ज्यान गइसकेको छ।
यसको प्रभावबाट बच्नका लागि विभिन्न देशहरुले आफ्नो देशमा ‘लकडाउन’को घोषणा गरेका छन्, नेपालले पनि सोमबारदेखि लकडाउनको घोषणा गरेको छ। सरकारको कदमलाई सम्पूर्ण नेपालीले स्वागत गर्दै साथ दिएका छन्। तर देशमा ‘लकडाउन’ पूर्ण रुपमा लागू हुन सकिरहेको छैन, किन ? ‘लकडाउन’को अर्थ हामी जहाँ छौं, त्यही बस्नु हो। हुने खानेका लागि त ठीक छ। तर जुन व्यक्ति दिनभरि कामपछि मात्र रातमा उसको चुलो सल्किन्छ, त्यसपछि मात्र ऊ र उसको परिवारले खान पाउँछ, त्यस्ता परिवारका लागि सरकारले के प्याकेज ल्याएको हो, केही योजना छ कि ?
बाँच्नका लागि खाना चाहिन्छ, खानाका लागि काम गर्नुपर्छ, कामका लागि आफू स्वस्थ हुनुका साथै कम गर्ने वातावरण र बजार चाहिन्छ। कोरोनाको सन्त्रासले बजार बन्द छ, मजदूरहरु घरमै थुनिन बाध्य छन्। यसले गरी खान पाउनेका लागि मर्नु न बाँच्नुको अवस्था छ। यहाँ मानसिकदेखि शारीरिक तनाव पनि उत्पन्न गराएको छ। उनीहरुलाई कोरोनाले मारोस् या नमारोस्, भोक र डरले पलपल मारिरहेको छ।
त्यस्तो व्यक्तिका लागि लक डाउन कसरी लागू हुन सक्छ ? त्यसबारे सरकारले सोचेको छ त ? अन्य देशले जनताका लागि विभिन्न किसिमका सुविधा तथा प्याकेजको घोषणा गरेका छन्, त्यसकारण लकडाउन कार्यान्वयनमा पनि सहजता आएको छ। छिमेकी मुलुक भारतले आधार कार्डका आधारमा महिनाभरिका लागि खाद्यान तथा अन्य राहत सामग्री घरघरमा पु¥याउने घोषणा गरेको छ। साथै स्वास्थ्यकर्मीलाई एक महिनाको तलव बराबरको रकम बोनसस्वरुप प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। कक्षा १ देखि १२ सम्मको विद्यार्थीहरुलाई ३१ मार्चसम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने पनि भारतले घोषणा गरेको छ। नेपाली जनताले सरकारले त्यति धेरै आशा गरेका छैनन्। तर, ज्यालादारी मजदूर र बिपन्नका लागि प्याकेजको घोषणा ढिलो भइसकेको छ।
दिल्ली सरकारले सर्वसाधारणका लागि रु. ५ हजारको प्याकेज ल्याएको छ। जसबाट गरीब निमुखा जनताहरुले सजिलैसँग यो लकडाउन भएको अवधिभरि खाना खान पाउँछन्। तर नेपाल सरकारले त्यस्ता गरीब र निमुखाका लागि के सोचेको छ ? आज तेस्रो दिनको लकडाउनमा देशका विभिन्न स्थान खाद्यवस्तुको भाउ तेब्बरले वृद्धि हुँदैछ, जसका कारण सर्वसाधारण पनि तनावमा छन्। कोरोनाको संक्रमणले मर्नुभन्दा पहिला मानिसहरु भोकमरी र कुपोषणले नमरुन्। त्यसका लागि सरकारले निम्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ।
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहको सहयोग लिएर हरेक वडा तथा स्थानीय तह स्तरमा बिपन्न नागरिकका लागि दैनिक खाद्यान्नको प्याकेज उपलब्ध गराउने।
सर्वसाधारण जनताहरुका लागि दैनिक रुपमा आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्री पाउन पसल खुल्ला राख्ने, पसलमा करीब १.५ मिटरको दुरी कायम गरी सामान किन्ने व्यवस्था गर्ने।
पसललाई दिनको एकपटक परीक्षण गरी सामान बेच्ने अनुमति दिने।
भ्याएसम्म सरकारले टर्की सरकारजस्तै हरेक घरको अगाडि खाद्य सामग्री प्याकेज सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने।
बजार व्यवस्थापनमा जोड दिने।
सीमित संख्यामा मात्र बजारमा मानिसलाई परीक्षण गरी पस्न दिने।
कोभिड–१९ बाट बँच्न अपनाउनुपर्ने उपायहरु
सबैभन्दा पहिला सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको पूर्ण रुपमा पालना गर्ने।
प्रत्येक ३० मिनेटमा साबुनपानीले मिचीमिची हात धुने।
प्रत्येक १ घण्टामा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने।
अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कने।
मास्कको प्रयोग गर्ने। मास्कलाई दिनहुँ डिटोलको तथा साबुनको प्रयोग गरी सफा गर्ने ।
एकै ठाउँमा बढी मानिसहरु भेला नहुने।
बस्दा कम्तिमा तीन फिटको दूरी कायम गर्ने।
सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने।
कोरोनाको कुनै लक्षण देखिएमा हटलाइन नम्वरबाट डाक्टरको सुझाव लिने।
शंका लागेमा आफू नजिक भएको अस्पतालमा गएर जाँच गराउने।
खाना खानुअघि साबुनपानीले मिचीमिची हात धुने।
खोक्दा वा हाछ्युँ गर्दा कुहिनाले ढाकेर गर्ने।
आफू पनि बचौं र अरुलाई पनि बचाउँ, लकडाउनलाई पालना गरौं।
जीवनको परिचय : समाजसेवा कि सम्पत्ति ?